Macallin Sarri oo rajaynaya inuu ka fogaado inuu ku beegmo kooxdiisii hore ee Napoli isku aadka maanta la sameynayo ee Europa League – Gool FM
(London) 15 Maarso 2019. Macallinka naadiga Chelsea ee Maurizio Sarri ayaa rajaynaya inuu ka fogaado inuu ku beegmo kooxdiisii hore ee Napoli isku aadka maanta la samaynayo ee siddeed dhammaadka tartanka Europa League.
Tababare Maurizio Sarri ayaa filanaya in kooxdiisii hore ee Napoli uusan ku aadin illaa final-ka Europa League, kaddib markii ay Chelsea xalay gaartay wareegga siddeeda ee Europa League.
Kooxda macallin Sarri ayaa cel-celis ahaan labadii lugood 8-0 uga soo baxday Dynamo Kiev kaddib markii uu xalay saddexleey dhaliyey Olivier Giroud kulankii ay ku adkaadeen 5-0 ee ka dhacay Caasimadda Waddanka Ukraine.
The Blues macallinkeeda ayaa saddex xilli ciyaareed ku soo qaatay isagoo tababare u ah kooxda Napoli ka hor inta uusan shaqada garoonka Stamford Bridge ka bedelin macallinka reer Talyaani ee Antonio Conte xagaagii hore.
Kooxda ka dheesha horyaalka Serie A ayaa sidoo kale horumar sameysay oo u soo baxday siddeed dhammaadka Europa League kaasoo isku aadkiisa maanta la sameynayo, macallin Sarri ayaana wajihi kara inuu dib ugu laabto Stadio San Paolo haddii maanta la isku beego Blues iyo kooxdiisii hore ee Napoli.
Yeelkeede, 60-sano jirkaan Sarri ayaa maanka ku haya inay adkaan doonto inuu dib ugu laabto dalka uu ka soo jeedo ee Talyaaniga, waxaana uu rabaa inaysan is arkin kooxdiisii hore ee Napoli illaa kulanka kama dambeysta tartankan oo ka dhacaya Baku 29-ka bisha May.
“Anigu waxaan door-bidayaa inaan iyaga ku wajaho final-ka ugu horreyntii, sababtoo ah taasi waxay la macno tahay inaan ku jirno final-ka waana ku faraxsanahay middaas,” ayuu yiri Sarri.
“Tan labaad, macnaheedu waa in Naples ay ku jiraan final-ka, waana ku faraxsanahay.
“Waxaad si fiican u taqaanaa xiriirkeyga wanaagsan ee aan la leeyahay Magaalada iyo dadkaba.
“Sidaasi darteed, aniga ahaan waxa ay noqonaysaa mid aad u adag in wajaho Napoli.”
Kooxaha ee u soo gudbay wareegga siddeed dhammaadka tartanka Europa League oo isku aadkiisa maanta la sameynayo ayaa waxa ay kala yihiin Benfica, Frankfurt, Villarreal, Slavia, Chelsea, Valencia, Napoli iyo Arsenal.